CrossOver 15.0: vhezheni itsva yakavakirwa paWine 1.8 | Linux Vakapindwa muropa
CrossOver 15.0 yakavakirwa paWine 1.8 uye nezviuru zvekuvandudza
Isaac | | Linux vs. Windows, Zvirongwa
CrossOver chirongwa chekutengesa, neyakavanzika uye yakabhadharwa rezinesi, iyo inobvumidza iwe kuti uite zvakafanana neWine, mhanyisa yemuno Windows software paMac OS X neLinux. CodeWeavers, ivo vanoona nezvekuvandudzwa kwayo, vagadzira forogo yewaini kwavanoshandura uye nekuwedzera zvimwe zvigamba uye nekuvandudza zvine chekuita neyemahara chirongwa. Nekudaro, Waini inoshanda uye inofadza vashandisi vazhinji.
Iye zvino vaburitsa CrossOver 15.0, iyo itsva vhezheni yeiyi software izvozvi zvavakirwa paWine 1.8. Iyo inouya nezviuru zvekuchinja kukuru uye kugadzirisa. CodeWeavers, iyo inotarisirwa kambani inotengesa iyi vhezheni vhezheni umo vazhinji veavo vanobatanidzwa muchirongwa cheWine vakashandawo. Iine graphical interface yayo yakapusa, inopa zvivakwa zvevashandisi uye inosangana nezvinodiwa nemakambani nevashandisi vanoda kumhanya isiri-yechinyakare software.
CrossOver 15.0 inounza iyo nyowani uye yakagadziridzwa graphical interfaceIyo zvakare inoshandisa PulseAudio yeiyo system kurira, Quicken 2016 ikozvino inoshanda pasi peCrossOver, pamwe nezvimwe zvirongwa zvakaita seMicrosoft Office, mitambo yemavhidhiyo, nezvimwe, izvo zvino zvinoshanda zvirinani neshanduko dzakaitwa. Kana iwe uchifarira iyi software, unogona kuiedza mune yayo-yemazuva gumi nemana Trial vhezheni yemahara kana kuitenga iyo € 14 kubva pawebhusaiti ye Codeweavers.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » CrossOver 15.0 yakavakirwa paWine 1.8 uye nezviuru zvekuvandudza
Sergio Dombo Velazquez akadaro
nei uchishandisa windows zvirongwa mu linux zvirinani kushandisa windows nechinangwa ichi
Pindura Sergio Stone Velazquez
Daniel G. Samborski akadaro
Ini ndaiziva kuti mamwe marezinesi anotendera kutengeswa kwekutengeswa kwezvimwe zvigadzirwa. Chandakanga ndisingazive ndechekuti iwe unogona kugadzirisa zvimwe kune yakasununguka uye yakavhurika sosi chirongwa, kuripeta, kurivhara kuruzhinji uye nekuparadzira.
Pindura kuna Daniel G. Samborski
Zvinoenderana nerezinesi. BSD semuenzaniso ... FreeBSD yakavhurika uye Mac OS X haisi ...
Ini ndinonzwisisa, ndatenda nekubatana. Zvinonakidza, ini ndaisaziva iro rezinesi.
Muti weKisimusi wemhuka: tora Krisimasi kune yako Linux koni
Luis Iván Cuende anotibatsira kuvhura maziso edu muiyi bvunzurudzo